Waxgaradka Iyo Siyaasiyiinta Beesha Sade Oo Qaadacay Qaabka Lagu Wado Maamul U Sameynta Jubbaland.*Daawo Video-ga* | Allgalgaduud News	Wednesday, June 19th, 2013	Home
Published on February 22, 2013 by galgaduud · 27 Comments
Muqdisho (AGGM): Waxgaradka, Siyaasiyiinta iyo Saraakiisha beesha Sade ayaa waxa ay maanta kulan balaaran ku yeesheen magaalada oo ay uga soo horjeedaan maamul u sameeynta Jubbaland
jooqle cade says:	February 22, 2013 at 9:00 pm	Walee sade way iska diideen in ay wax lug ah ku yeshaan burburinta dalkooda hooyoo…alloow khaatumada toosan nagu hagaaji aamiin..aamiin.
Reply »	wadaad yare says:	February 22, 2013 at 9:03 pm	Sade
Sidii laga filayey ayey sameeyeen Sade. Qabiil hadduu wax tarayo 22 sano ayaa la arki lahaa wuxuu taro. Qaranka Soomaaliyeed maalintuu hiilka u baahanyahey waa maantoo kale. Kaalinta ay geysan karaan Sadena ma jirto qolo kale oo maanta geysan karta.
Maxey ku dhacdey in Kenya iyo Itoobiya lasoo hor kaco maanta iyadoo dowlad noo dhisantahey adduunkii aqoonsadey?
Reply »	Geeel Qaaad says:	February 22, 2013 at 9:12 pm	Maxay ku dhacday ina uganda brundi iyo jabuuti lasoo dhaweeyeo kenya iyo ethiopia oon darisnahayna la fogeeyo??
Reply »	cabdiwali says:	February 22, 2013 at 9:20 pm	masha allah sede guul ayaan idin ku ogahay iyo axyaa wadi illeen wadani la iskamadhigee waaloodhashaa waligiin adinka ayaa kur uhay calanka ee hadhiginaha adinka iyo rer qatumo insha alah guul ayaa nii rajeen
Reply »	cabdiwali says:	February 22, 2013 at 9:22 pm	tankale hadii aan ujaba ninka labaxay geelqaad walal inta aad shegeyso somaliya wey joogaan waa runtaa lkn ayaga somali umakala eexdaan taas lasoco maxa yelay keynya waxa aysameyneyso wax la aqbali karo ma ahan viv seda soali gor dowlad diin hoos lanka kor
Reply »	dalal diini says:	February 22, 2013 at 9:46 pm	Gobanimo adeerayaal waa saan idin ka fileyney..jubboyinka wax aynana Anagu hormuud u aheyn ka shaqeyn mayaan oops soomaali kung qanacsantahay Sade sandule ma ogola sinaanta ayuu horseed u yahay iyo cadaalada.
Reply »	warsame says:	February 23, 2013 at 11:22 am	to Dalal diini
hadaad ogolaan weydo nidaam dadku u siman yahay oo jubaland ka hirgala waxaa dhici doonta in nin kasta dagmadiisa ku ekaado,inta aad gedo ku ledahay unbaanad ku ekaan, wax aniga kaligay iga lumina ma jiro oo adigana kaa lumayn.
Dowlada dhexe waxaad isu xijinaysaan bal in aad yara rarataan sidii aad u rarateen tii adeerkiin hogaaminayay,laakiin arintaasi waxay keenaysaa in ay dunto dowladani sidii tii ina bare u duntay.
waxaad tidhi wax aanan hormuud ka ahayn shaqayn maayo,waxaan kuu cadaynayaa walaal anigoon hormuud kaa dhigin marna jubaland hormuud kama noqon kartid ee soo mar qaabkii aad hormuud ku noqon lahayd.Laakiin hadaad ka wado aniga jubaland iska leh waa beentaa,kaliya waxaad leedahay inta aad ka dagto gedo oo iska kooban,labada jubana shuqul kuma lihid,waxaana gardaro horteed ah in dhul nin walaalkaa ah oo 9 bilood ku dhashay sidaada oo kale leeyahay aad kalgaaga galiso in aad qaadan karto. Iska daa in aad jubooyinka dagaan ku yeelataane waxaana marna idinka cafinaynin in Absame oo nool aad ku hamidaan in aad qaadataan dhulkiisa.
waxaad noo kaashateen Xabashi,Hawiye iyo raxanweyn si aad dhul nooga qaadataan. Hadii raali galin iyo qoomamo walaal laydinka waayo waxaa dhici doonta in aad gurataan midhihii aad beerteen,wali maanaan halmaamin wixii aad ka sameyseen waamo 1988-1990. Waxa la yaabka nagu noqday waxa weeye ninkii waxaad aragtay nagu sameeyay een iska daynay ee hadana ku doodaya in dhulkayga wax ku leeyahay.
War wax caqli leh miyuusan ku jirin umadan meesha wax ku soo qoraysa ee ku hadaaqaysa wax xaqiiqda ka fog.
Reply »	Caabudwaaq says:	February 23, 2013 at 5:28 pm	Ku: Warsame
Dadka kalaad la yaabantahay oo khalad aysan laheyn dusha ka saaraysaa adigoon dhag lagu qabto laheyn.
Walaal adoo ilaahay ka baqaya, halkeebuu Absame leeyahay oo Jubaland kamid ah? Absame dhulkiisa waa la yaqaan; Waa Soomaali Galbeed oo lala dego iyo NFD. Labadaba waxay lahoos galeen Itoobiya iyo Kenya oo ku guumeysata oo dumarkoodana ku kufsada caruurtoodana ku laaya. Dhul kale oo Absame ugu haray Somaliya majiro. Waxaad dhacsan weydeen dhulkiinii iyo dumarkiinii oo aad gumeysi aqbasheen, markaasaad waliba caqli xumadiina kusoo qamaamaysaan dhul rag dhacsanayay ka qarni ka qarni oo aad rabtaan in aad misane guumeeysi la hoos gashaan. miyaad sixrantihiin koley sidaan kuma caafimaad qabtaane? mise gumeysigaa caqligii qalibay?
Jubaland xoogaa ogaadeen ah baa hada degan laakiin taas macneheedu mashan waxbay ka leeyihiin. Waa qoysas fara ku tiris ah oo waagii dhaweyd ee Dawladii Kacaanku rabtay inay Idin xoreyso idinka Soomaali galbeed ah meesha lasoo dajiyay. Waxaa soo Itoobiya agteeda kasoo raray Maxamed Siyaad Barre oo kala jeeday siyaasad ahaan iyo in marka Itoobiya la xanuunjiyo aysa maatada ka aarsan sida ay hadaba idinku sameyso.
Dadka meesha lasoo dajiyay xitaa dad xoog leh maaheyn ee waxay ahaayeen dumar iyo carruur. Waa iyadii Dajuuma iyo Sablaale lagu furay oo Bootashkii nafaqada ahaa lasiiyay. Alla walaal jisaarsanidinaa? Mise xaajadu waa Boorashkaaga Cunaa Bootadaada yaqaan?
Walaal xishooda oo dadkii awgiin iyo inay idin xoreeyaan Kenya iyo Itoobiya ola kala dhintay cadawgiina ha ka raacinina. Sade oo kula dhashay iska daaye xitaa waa inaad tixgalisaa oo ka xishootaan Soomaalida kale qabiil kasta ha noqdee maxaayeelay in cadawga lagaa xoreeyo looma kala harin. Jisaarka iska dhaafa, dhulna Soomaaliya kuma lihidin oo idiinkuguma harin ee qamaamka joojiya yaan la iskiin raacine, dadku Soomaalinimo iyo Muslimnimay idinku soo dhaweynayaane.
Waxaan u maleynayaa inuu xaalku yahay “Waano Abuuris baa ka horreysay” maxaayeelay Maxamed Cabdille Xasan oo idinka dhashay baa caaqibo idinka waayay oo aad cidla oga cararteen oo aad cadawgiisa usoo raacdeen isagoo Dawlado la dagaalaya oo dalkiisa difaacaya sida aad hadeerba Sade isugu soo jijiminaysaan. War caqli yeesha inta oo ka fikira mustaqbalkiina. Waa talo.
Reply »	Siyaasi hore says:	February 22, 2013 at 9:56 pm	Beesha sade wadad wadaniyiin ah umana qalanto mansab sade maha in ay bur burin iyo kala qaybin dad iyo dal somaliyeed oo gacan shisheeye ka dabayso taageeran ama racaan viva sade <3
Reply »	wadaad yare says:	February 22, 2013 at 10:22 pm	Geelqaad
Burundi iyo Uganda dowladda soomaaliyeed iskuma taagaane meeshey gacan uga baahato ayey gacan ka siiyaan. Laakiin Kenya iney dalkeenni dowladdiisi u gacan dhaafto iyadoo qabiil kusoo ganbaneysa ayey rabtaa. Laga yeeli maayo taas Kenya walaa qabiil toona. Dalku dowlad ayuu leeyahey.
Reply »	cabdiraxman says:	February 22, 2013 at 10:37 pm	kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk adr oday qayliyey cidna ujoojin mayso oo saacid hurdaye lcg siiyey maamulka jupaland waa dhismaya kunaxow nafta waa xasan culusow coladi 22sano somali ayu aburaya saacid hurdaye hadu ugu hanjay ama xilan kaqaday ama maamulka reerkaga kayihiin hurmuudka jooji adr danta lafiirin mayo shakhsi saacid hurdaye bari meesha waakatagaya lkn shacabka walaalaha ah jubooyinka maxa udan ah oo waligood gacmaha iskuqabsankaran weeye meesha
Reply »	ahmed ali says:	February 22, 2013 at 11:16 pm	waxan ka codsan laha odayaasha muqdisho ka dhexqaylinaya ha ha ka qateen wixi musacadad ah oo loojistako aha meeshana ha tageen waxa qaldana ha sexeen xamar yaysan ka soo dhex qaylin
Reply »	LABI YAAL says:	February 22, 2013 at 11:43 pm	ADEER xaajadu waa sidaas waana ku taageeraynaa, odayaasha guulaysta ayaan leenahay, horay bay uga Harleen masuuliyiinta gobolku, ADEER marna yaan la ogolaan qorshe dibada DADKA LOOGA keeno
Reply »	Kenyaati says:	February 23, 2013 at 12:52 am	OGAADEEN AMA(KABLALAX) WUU ISKUTASHTAY,EE SADOOW, GO’AAN EDINKAHELNO OO CAD,JAWAAAB KU SAABASAN JUBALAND OODAGDAG AH BAAD HELYSAAB.
Reply »	abdi yare says:	February 23, 2013 at 1:10 am	Si fiican bay u dhigeen lkn ogaada qaar kale oo sade ah inay arinta wax ka wadaan kala qaybinta halaga hor though late tahay
Reply »	mariam says:	February 23, 2013 at 2:32 am	waxaan ku faraxsanahay ama sharaf noo ah in ay diidaan beesha sade kala qoqobida uma somaaliyeed iyo maamul usamaynta kenya ay u samaynayso gobalada jubooyinka juba soomaalibaaleeh soomali bayna u taalaa maamul usamaynteeda
Reply »	xasan says:	February 23, 2013 at 2:38 am	asc wadad yare walal waan ku salamay hadad tahay wadad yarihii shabeel duula ee south africa nooga soo tagay
Reply »	Kacaan says:	February 23, 2013 at 4:15 am	Noolaada!
Reply »	Geeel Qaaad says:	February 23, 2013 at 6:23 am	Dadkan mareexan baan layaabanahay war waxad diidaysaan wa sideda lkn wiilka cayda kadaaya
Reply »	wiil sade says:	February 23, 2013 at 6:52 am	aad iyo aad baan ugu faraxsanahay go aanka aygaaren wadaniyiinta sade maantana waa maalintii soomaali lamidan lahaa kenya itobiya waxay naga galeen dabi mana iloobidono 22 sano waxii xabad kadhacaysay cideena aygaa kamasulahaa marka ninka dabada kuwa toow soomaaliweyn toosto tashataye lalaabo shisheeyahaaga intaan birtu ku qaban
Reply »	maxamed somali says:	February 23, 2013 at 9:53 am	sallam caleeykum wallaalayaal bacdu sallan ma xuma in shir la qabto maamul sameeyn laakiin wadada uu lahaa hala maro waxaan nahay qaran xor ah hadii ay hoos wax lagu wadin waa in dowladu hormuud ka tahay ka baxa sheekadan raqiiska ah ee ah hawiye iyo daarood iyo kala qaybinta umada dadka ha doortaan siyaasiyiintooda min tuulo min degmo min gobol ka bacdi yaa diidi kara cadaaladas waa cidna laakiin anagaa wax soo dhoodhoobayna kenyana hoostaan uga jirnaa iyo amxaaro wax soconaya maaha waa in gobolada gedo iyo jubooyinka ay tuulo walba xor ka ahaato alshabaab si ayagoo xor ah ay u doortaan gudoonkooda taas baa cadaalad ah marka nimankan waxay la degdegayaan waxbaa ka qaldan,gudoonka baarlamaanka ha dajiyo marka hore shuruucda federaalka ee canshuuraha iyo natural resources ka ka dib aan isu imaano..
Reply »	warsame says:	February 23, 2013 at 11:41 am	to maxamed somali
waxaad is leedahay arintaa dan qabiil ayaa kuugu jirta,qarankana waa loo siman yahay marka la quman yahay laakiin hada waxaa cad in ay si toos ah kuula safan tahay dowladu. Arintaasina waa daliil cad in dowladu qabiilana taageerayso qabiilana ka soo horjeedo,intaasina way ku filan tahay in ay dowlada ku burburto.
Jubaland in ay dagi weydo waxaa sabab u ahaa Absame,waxaana hada go’aansanay in aan dajino marka cid kasta iskeed u daashay.
Sade warka joojiya,hadaad diyaar u tihiin in aad Hawiye wax la qabsataan waxba ha noo nifaaqiya ee warka cadeeya,hadaad diyaar u tihiin in aan wada dhisno jubaland waxba hawiye ha u nifaaqina ee warka u cadeeya.
Waqtigii labaclabaclaynta waa la dhaafay,waxaa la joogaa waqtigii aad cadayn lahaydeen dhanka aad jirtaan oon nifaaq lahayn.
4 sano ayaan fursad idin siinay bal in aad goaan ku gaadhaan,waad gaadhi waydeen ilaa hada,marka is cadeeya dhankeed jitaan hawiye isagu mowqifkiisa wuu cadaystaye.
Reply »	maxamed says:	February 23, 2013 at 9:54 am	sxbyal kismaayo ogadin iyo keny hadey haysan karan ha hastan
Reply »	Xog-ogaal says:	February 23, 2013 at 11:41 am	ASC,
Wadaad Yare, Jooqle Cade, Abdiweli, Dalal Diini, Siyaasi Hore, Lebi Yaal iyo Mohamed Somali:
Su’aashan ka jawaaba:
1. Yaa Kenya dalka Soo geliyey? Hawiye waana Sheekh Shariif.
2. Kenya maxay doonaysaa? Badda Somalia oo ah 200 mile ama 270 Km oo horay Sheekh Shariif u saxeexay in laga dhigo 12 mile oo keliya si badda Jubooyinka Kenya shidaalka uga qodato.
Hadaba si aan dhinac walba la inooka bahdilin aan dhisano Jubooyinka, isla markaana aan ka ilaashano Kenaya.
Haddii aan soo dhawayno Madaxda Hawiye uga danbayno dhismaha Jubaland kuwaas oo ku socda ama u tar tamaya sidii mar kale loo iibin lahaa badda Somalia, waxaynu markaas taageeraynaa fekerka Hawiye ee xadaynta Badda Somalia ee Siyaad Barre ka digay 200 Mile.
Mar hore ayeynu qaldanay, waana markii 7 sano Habar Gidir inala xumumaysay Kismanyo. Walaale yey naan mar kale qalad ka gelin Somali oo dhan, oo yey naan ka qayb qaadan iibinta badda Somaliyeed iyo bur burinta Daarood.
Sitaas uga bad baadno aan taageerno dhismaha Jubaland.
Reply »	Runsheeg says:	February 23, 2013 at 11:59 am	Dhamaan ACWW
Salaan ka dib waxaan idiin sheegayaa beesha sade ma ahan 10 nin oo meel ku shiray majirto meel sade ku taageeray ama ku diiday Jubaland ragga qaylianaya waa rag danahooda ka waayay.
Ta Jubaland sade maamul in la helo iyaga ayay dan u tahay sababtoo ah waa qabiilka kaliya ee aan 22 sano dagaal ka bixin iyagana maamul samaysan waayay,waxaan ahay reer Gedo waxaan qabaa sade ragii hogaaminaayay 22 sano in ay ku fashilmeen siyaasada somaliya waxaa isweydiin mudan yaa diidan yayse dan ugu jirin jubaland?
sade waxaa diidan maamulka jubaland waa reer mudug oo aan lahayn rajo ay kaga qayb gali karan jubaland waxaa ay dan u tahay sade ama marexan ka gedo in ay maamul helaan,tan xamar waa arrin sahlan xamar iyo bayadhabo wali lagama hadlin in maamulada ka jiraa ay baadil yihiin tahayna in la qaybsado waa jirtaa in jubalabd qabiilo badan ay degan yihiin sidoo kale xamar qabiilo badan ayaa degan qaarna xoog ayaa looga soo saaray guryahoodii waana la haystaa xaq ayay u leeyihiin mamaulka in ay ka qayb qataan sidoo kale baydhabo marka xamar waa iska waqti lumis waana naqaan ragga xamar joga waxaa ay soo wataan waa habargidir oo wax ay rabtaa un ay tahay bililiqo kaliya sabab maamul loogu daraana maba aqan sababtoo ah habargidir hal guri kuma lahan jubaland.abgaalna warkiis daa isbahaysigii habargidir qalad ayuu ahaa sababtoo ah 12 tikinko oo ay soo wada mariyeen ayay lugta kula galeen kismaayo iyo bare hiraaleoo iska illaalinaayay marexanka reer gadoodka qaarkiis sida reer diini iyo talxe
Reply »	Xog-ogaal says:	February 23, 2013 at 12:12 pm	ASC,
Wadaad Yare, Jooqle Cade, Abdiweli, Dalal Diini, Siyaasi hore, Lebi yaal, Mohamed Somali iyo Ragga kale ee Sade lana fekerka ah ogaada:
1. Inaka oo Dawlad ah waxaan Muqdisho ka dirnay Jabhadihii: Somali Galbeed, Oromo, Tigre iyo Eriteria, si ay u ridaan Xabashidii Shuuciga ahayd, waynu ku guulaysanay.
2. Xabashidii Shuuciga ahayd waxay Addis Ababa ka soo direen: SNM(Somaliland, SSDF iyo USC, waxayna bur buriyeen Dawladii Somaliyeed. Bal dhegaysta khudbadii u danbaysay ee Jaalle Siyaad alaha u maxariistee. Somaliland waxay intaas u dagaalamayeen in Somaliya ka go’aa, USC waxay u dagaalamayeen bililiqo, welina waa kuwaas badda Somaliya iibinaya.
Maxaa hadda inala gudbooboon?
1. Waa in aan taageerna Jubaland.
2. Waa in aan Kenya ka ilaalinaa badda Somalia in lug danbe ku yeelato.
3. Waa in aan Ethiopia u waydiinaa in Kiilka Shanaad ee Somalia ee u ogolaadaan Referendum (afti) si codkooda ku doortaan xornimadooda ama masiirkooda, waayo waxaynu Ethiopia ku taageernay in ay iska rido Xabashii gumaysanaysay, dalkeenana afti u ogolaato, taasna waa ta Hawiye ka soo horjeedo.
Bal eega Dhulbanate oo keliya ayaa is hor taagay Somaliland in ay ka go’do Somalia.
Haddii aan taageerno dhismaha Jubaland waxaynu taageernay inaka oo Maamul Goboleed ah in aan Kenya xakamayn karno.
Haddii aan diidno maamulka jubooyinka waxaad fursad u siisay Hawiye in ay Kenya mar kale ka iibiyaan badda Somalia.
Walaale indha fur, oo ha arkin mad madaw Daarood dhex diisa ah ee meel fog iyo Somalinimo wax u arag. Hawiye Dawladii Somaliyeedna rid, dawladna dhisi kari waa, Maamulka Jubooyinka waa kaas oo kuu duminayaa.
Sidaas daraadee yaan Hawiye ianku shaqaysan ee danteena, danta Daarood iyo midda Somali wayn aan isu taagno.
Reply »	QOOQAANI says:	February 23, 2013 at 2:09 pm	WAXAA LOO BAHANYAHAY DOWLIDNIMO IYO KALE DABA WAX QABIL LUGU GARI KARO MAJIRTO DOWLADA WAA IN AYRAACDO DASTUURKA SOMALIA HADII KALE WAXAA LUGU NOQONAYAA DAGAALKII SOKEYE,